10 Talaabo oo lagu dhisi karo Barnaamijka Tayeynta Bulshada ee Shaqaalaha U-doodista Bulshada | Martech Zone
Jimco, Juun 28, 2017 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
In kasta oo shirkadaha waaweyni ay leeyihiin miisaaniyad ka buuran oo ay ka iibsan karaan muuqaalka baraha bulshada, waxaan runtii aad ula yaabay sida ay shirkado yar u qoraan awoodda shaqaalahooda saldhig si ay u caawiyaan. Waxaan si wanaagsan uga wada hadalnay arrintan Amy Heiss oo ka tirsan shirkadda Dell, Kuwaas oo ku dhex maray natiijooyinka cajiibka ah ee ururradooda ay ku gaareen iyada oo loo marayo dhisidda barnaamij u doodid bulsho oo shaqaale wax ku ool ah.
Marka aan macaamiisha kala hadlayno u doodista bulshada ee shaqaalaha, inta badan waxaan ku soo celiyaa sheeko kale taas Calaamadee Schaefer la wadaago oo ku saabsan shirkad caalami ah oo leh boqolaal kun oo shaqaale ah. Markii ay ku daabaceen baraha bulshada, waxay lahaayeen wax yar oo ka mid ah waxyaabaha la jecel yahay iyo retweets. Mark ayaa weydiyay (dib loo sifeeyay), "Marka shaqaalihiina aysan ku qanacsaneyn inay wax akhriyaan oo ay wadaagaan waxa aad ka kooban tahay, sidee ayaad u malaynaysaa inay rajadaadu iyo macaamiishaadu u daawanayaan?". Waa su'aal adag advoc u doodista bulshada ee shaqaaluhu maahan mid si fudud ku saabsan wadaagista, sidoo kale waa daryeel.
Ururada kale ee aan lahadlay waxay ka labalabeenayaan inay codsadaan caawimaadda shaqaalahooda, qaarkoodna xitaa siyaasadaha dejinta ka dhanka ah waa Gabi ahaanba maskaxdayda ayay garaacaysaa in shirkaddu xaddidi doonto tayada ugu qaalisan uguna qiimaha badan oo ay ka joojinayso inay la wadaagaan aqoontooda, hamigooda, ama xitaa ra'yigooda. Dabcan, waxaa jira waxyaabo ka reeban oo leh warshado si heer sare ah loo nidaamiyay, laakiin i tusi warshad nidaamsan oo wali waxaad ka heli doontaa barnaamijyo wax ku ool ah oo ka shaqeynaya caqabadaha.
Weli, shirkadaha kale waxaa ku nool shaqaale aan dareemin wax waajib ah inay ka caawiyaan dhiirrigelinta shirkadda. Xaaladahaas, waa inaan si qoto dheer u fiiriyaa dhaqanka shirkaddaas iyo nooca shaqaalaha aan shaqaalaysiiyo. Ma qiyaasi karin in aan shaqaalaysiiyo shaqaale aan dooneyn inay shaqadooda kor u qaadaan. Mana qiyaasi karin inaan shaqaale ahaado oo aanan ku faanin inaan sare u qaado dadaalka kooxdayda.
Shaqaalaha hadda waxay ka ciyaarayaan kaalin muhiim ah dadaallada suuqgeynta waxyaabaha ururku wado. Hoos u dhaca ku yimid gaadhitaanka dabiiciga ee warbaahinta bulshada iyo kororka baaxadda leh ee mugga mawduucyada, tartanka loogu jiro in dareenka dadka la helo ayaa ka tartan badan sidii hore welibana shaqaaluhu waxay noqdeen hanti muhiim u ah danjireyaal sumcad ku leh warbaahinta bulshada Xaqiiqdii, Shirkad ay la shaqeeyaan 20 shaqaale kana badan 200 oo qof shabakadooda waxay soo saari kartaa afar jeer wacyiga baraha bulshada.
Waa maxay U-doodista Bulshada ee Shaqaalaha?
U-doodista bulshada ee shaqaalaha waa dhiirrigelinta urur ay shaqaaluhu ku soo bandhigaan shabakadooda warbaahinta bulshada.
Ku marti qaado shaqaalahaaga inay si iskood ah uga mid noqdaan barnaamijkaaga u doodista bulshada shaqaalaha cusub.
Abuur warbaahinta bulshada tilmaamaha shaqaalahana la baro sida ugu fiican.
Buuxi dusha saaran habka loo adeegsado aaladda u doodista shaqaalaha ee aad isticmaali doontid.
Go'aamiso ujeeddooyinkaaga ganacsi iyo tilmaamayaasha waxtarka muhiimka ah barnaamijka.
Abuur u doodid shaqaale kooxda si loo maareeyo dadaallada shirkadda oo dhan loona magacaabo isku-duwaha barnaamijka.
Buuxi a barnaamijka tijaabada ah koox yar oo shaqaale ah ka hor inta aan loo kordhin ururka oo dhan.
Saxee oo samee noocyo cusub oo cusub oo khuseeya content shaqaaluhu inay la wadaagaan kuwa raacsan.
Go'aami haddii nuxur ahaan iyo fariin la doonayo inay ahaato horay loo ansixiyay waxaa isuduwaha barnaamijka.
La soco waxqabadka barnaamijka iyo abaalmarin shaqaalaha dhiirigelin u ah taageeradooda.
Cabbiraad soo noqoshada maalgashiga dadaalladaada udoodida shaqaalaha adoo raacaya KPI gaar ah.
Si loo muujiyo muhiimada istiraatiijiyadan iyo sidoo kale saameynta, dadka waawayn ee SocialReacher waxay soosaarteen xogtan, Awoodda u doodista Shaqaalaha Warbaahinta Bulshada, Taasi waxay muujineysaa waxa ay tahay, sababta ay u shaqeyso, sida ay u shaqeyso, iyo natiijooyinkeeda ururada sida wax ku oolka ah ugu fidiya barnaamijyada u doodista warbaahinta bulshada shaqaalaha. Hubso inaad dhex booddo si aad u aragto fiidiyowga sharraxa weyn ee saaran SocialReacher!
Ku saabsan SocialReacher
SocialReacher waa aalad u doodida shaqaalaha warbaahinta bulshada oo awood u siineysa shaqaalaha shirkaddaada iyo la shaqeeyayaashu inay noqdaan u doodayaasha bulshada calaamaddaada. Kordhi joogitaanka warbaahinta bulshada ee shirkaddaada, xooji gaaritaankeeda iyo dhisida kalsoonida adoo kaqeyb galaya kooxdaada wadaagida iyo kor u qaadida waxyaabaha kajira shirkadaha. Shaqaalahaaga ayaa ah udoodaha nooca ugu fiican ee aad heli karto. Hadday rumaystaan, inta soo hartay ayaa ku dayan doonta.
Tags: doodiddau doodista shaqaalahaabaalmarinta shaqaalahau doodista bulshadabarnaamijyada u doodista warbaahinta bulshadabarnaamijka abaalmarinta bulshadasida loosida loo dhiso barnaamij u doodidu doodista warbaahinta bulshadabaraha bulshadawaxawaa maxay u qareemida bulshada
All-American iyo CEO Jeremy Bloom waxay ka wada hadlayaan isdhexgalka